Tetezana antitra loatra: miandry taona maro sy famatsiam-bola vao amboarina | NewsMada
Tetezana antitra loatra: miandry taona maro sy famatsiam-bola vao amboarina
Maherin’ny 50 taona ny ankamaroan’ny tetezana eto Madagasikara hita amin’ireny lalam-pienena ireny. Misy ny nasian-panavaozana, misy tsy mihetsika mihitsy. Ny vanim-potoana anefa mivoatra hatrany, tsy mifanaraka amin’ireny fotodrafitrasa ireny intsony.
Raha tany am-boalohany, taona 60 sy 70, natao hahazaka 15 t na 20 t ny tetezana hita ain’ny lalam-pirenena maro. Efa tsy izany izao ny fiara vaventy mandeha amin’ireny lalam-pirenena ireny, tsy latsaky ny 40 t izao izy ireny, toy ireo hita amin’ny lalana mankany Toamasina (RN2). Lalana 360 km, 12 ora raha haingana indrindra ny hanaovana azy, noho ny fahamaroan’ny fiara vaventy sy ny faharatsian’ny lalana. Nitombo isa ireo fiara vaventy mitatitra solika hatramin’ny lalamby tsy azo antoka na tsy nandeha intsony.
Andrasana hirodana vao amboarina. Amin’ny lalana mianatsimo (RN7), tamin’ny volana septambra 2017 nirodana ny tetezana eo Vohiposa, tsy nahazaka ny fandalovan’ny fiara vaventy iray. Ny Vondrona eoropeanina no nanavotra haingana nitondra fanampiana nametraka « pont Bailey » teo fa lasan’ny rano indray izany, tamin’ny fiandohan’ity taona ity, niandrasana ny fidinan’ny rano ary nafindra toeran-kafa. Toy izany koa ny tetezan’i Manakara Be, nirodona ny taona 2012 noho ny fahanterany. Niandry famatsiam-bola avy any ivelany, ka vao tamin’ny 2017, natomboka ny fanadihadiana sy ny fanarenana azy io.
Toy izany koa ny fahasimban’ny tetezan’i Mananjeba, eo anelanelan’i Ambondromamy sy Ambilobe (RN6), lalana mianavaratra. Efa natomboka ny asa fanamboarana azy, saingy nasiana fepetra izao ny fandalovana eo.
Nasiam-panavaozana tanteraka kosa ny tetezan’i Bestiboka (RN4). Tetezana naorina ny taona 1927, izao izany vao vita ! Toy izany koa ny tetezan’ny Kamoro, namboarin’ny vazaha frantsay ny taona 1934, tsy nasiam-panavaozana raha tsy tamin’ny taona 2015, ka tamin’ny taon-dasa vao vita tanteraka, mifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny, nandaniana 20 tapitrisa dolara.